Properties for Sale in Kalaw - Shan State | iMyanmarHouse.com
All TownshipsTaunggyiKalawAung BanKengtungTachileikHsipawKyuakmeLashioMuseNawnghkioHopongLoilenNyaungshwePindayaPinlaungMatmanMonghpyakMonghsatMongkhetMonglaMongpingMongtonMongyangMongyawngHopangHseniKonkyanKunlongKutkaiLaukkaingMabeinMongmaoMongmitMongyaiNamhsanNamtuNanhkanPangsangPangwaunTangyanHsihsengKunhingKyethiLaihkaLangkhoLawksawkMawkmaiMonghsuMongkaungMongnaiMongpanNansangPekonYwangan
Properties for Sale in Kalaw
Regions Shan State
Hotel ဆောက် ချင်သူ များအတွက် နေရာကောင်း ၊ View ကောင်းသော ခြံကွက်လေး
Kalaw | Shan State
⛰ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ၊ ကလောမြို့နှင့် နာရီဝက်သာ သွားရသော မြင်းဒိုက် တွင်...
Ad Number S-9627985
JARNAK Real Estate Co., Ltd. Close
အလှပဆုံးနှင့် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သော ရပ်ကွက် ၉ တွင်တည်ရှိပါတယ်။
ကလောမြို့မှ အလှပဆုံးနှင့် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သော ရပ်ကွက် ၉ တွင်တည်...
Ad Number S-9596994
သိန်း 1000 ညှိနှိုင်း 100'x150’ ဂရန်မြေ ရေလွယ်၊ မီးလွယ် ပတ်ဝန်း...
Ad Number S-9538545
Ad Number S-9666233
ကေလာၿမိဳ႕ရဲ႕အတိတ္ဆိတ္ဆံုးေနရာေတြထဲက တေနရာမွ ျခံကြက္ေကာင္းတကြက္
Ad Number S-9666211
ကေလာၿမိဳ႕ရဲ႕အလွအပကိုၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ hostel ေလးကေန
Ad Number S-9666169
အၿမဲတန္းလိုလို စိမ္းလန္းစိုေျပေနတဲ့ ဒို႔ကေလာၿမိဳ႕ေလးမွာ
Ad Number S-9666122
Ad Number S-9665057
Ad Number S-9665048
Ad Number S-9665035
Ad Number S-9665012
စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီး Oxygen ကိုအျပည့္၀ရေစမယ့္ေနရာေလး
Ad Number S-9662334
Ad Number S-9662302